Kamshaan Barruu Sajoo barruu sanduuqaawwan addaa galchuuf of keessatti qabateera.
Barruu sanduuqa galmee ammee keessatti eessatti cuqaauu yookin harkistu fakkassaa. Galmee keessatti bakka barbaaddeetti cuqaasiiti, itti ansuun barruu kee barreesi yookin maxxansi.
Barruu Goodayaaf Tolchuu
Barruu sanduuqa galmee ammee keessatti cuqaasuun yookin harkisuun fakkaasi. Barruun galchitu dheerinaa fi bal'ina barruu sanduuqaa akka tolutti ofumaa hangamtaan jijjiira. Galmee keessatti eessattiyyuu cuqaasi, ittaansuun barruu kee barreessi yookin maxxansi.
Sarara balballoomii rektaanglii keessatti dhumuun, galmee ammee garamirratti harkistu kaasii. Hangamtaa balballoo jijjiruudhaaf qabannoo balballoo harkiisi. Balballoo rectaanglii marfamaatti jijjiiruuf, yoo qareen gara harkaatti jijjiirame fiixee qabannoo guddaa harkiisi. Barruu dabaluuf balballoo fiixee cuqaasi ittaansuun dhaan barruu kee barreesi yookin maxxansi.
Barruu Goodayaaf Sarjaa Tolchuu